Iran oo dardar galisay sameysashada hubka nuclear iyo Qaramada Midoobay oo ka hadashay | XORRIYA NEWS
Home Caalamka Iran oo dardar galisay sameysashada hubka nuclear iyo Qaramada Midoobay oo ka...
Iran oo dardar galisay sameysashada hubka nuclear iyo Qaramada Midoobay oo ka hadashay
Iran ayaa hadda haysata Macdanta uranium-ka in kabadan xadigii loo gu ogolaaday heshiiskii caalamiga ahaa, sida ay bayaanisay hay’ada Qaramada Midoobay u qaabilsan la socoshada Nukliyeerka.
Iran ayaa had iyo goor sheegta in ay xaq u leedahay in ay hesho tamarta nukliyeerka, waxaanay ku hoosta ka xariiqday in barnaamijkeeda nukliyeerku yahay mid nabagelyo oo keli ah.
Arrintan ayaa ku soo aadaysa kadib markii Iiraan ay fursad u siisay kormeerayaasha IAEA inay galaan mid ka mid ah laba goobood oo looga shakisan yahay inay horey uga kaydiyaan tamarta nukliyeerka.
Sannadkii hore, Iiraan waxay si cad uga noqatay ballanqaadyadeedii ay ku gashay heshiiskii caalamiga ahaa ee nukliyeerka, oo ay saxiixeen 2015-kii Iran, Shiinaha, Faransiiska, Jarmalka, Ruushka, Ingiriiska iyo Mareykanka.
“Muunaddan ayaa ay baadhi doonaan shaybaadhaadhayaal ka tirsan shabakadda hay’adda, “ayay ku sii dareen bayan kooda.
Iran ayaa gabi ahaan hakisay u hoggaansanaanta dhowr ballanqaad sanadkii hore iyada oo ka ga fal-celinayso cunaqabateyntii Mareykanka ee uu dib u soo celiyey Madaxweyne Donald Trump markii uu heshiiska ka baxay.